" Dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. " Fil.2:2
Efa tonga ny fotoana tokony hisian'ny fanavaozana tanteraka. Rehefa miantomboka io fanavaozana io dia hanetsika ny mpino tsirairay avy ny toe-tsaim-bavaka ary handroaka ny toe-tsain'ny tsy fifankahazoana sy ny fifandirana tsy ho ao amin'ny fiangonana. Hifanatona ireo izay tsy mbola nanandrana ny fisakaizana kristianina hatramin'izay. Ny mambra iray izay efa miasa araka ny tokony ho izy dia hitarika ny mambra hafa hiara-manandratra vavaka fanelanelanana aminy mba hirotsahan'ny Fanahy Masina. Tsy hisy ny savorovoron-kevitra amin'izay satria hifandrindra avokoa ny rehetra miaraka amin'ny fisainan'ny Fanahy. Ho rava ny fefy mampisaraka ny mpino samy mpino ary zavatra mitovy ihany no horesahin'ny mpanompon'Andriamanitra. Hiara-miasa amin'ny mpanompony Andriamanitra. Rehefa hivavaka ny rehetra dia ho takany tsara ilay vavaka nampianarin'i Kristy ny mpanompony manao hoe: "Ho tonga anie ny fanjakanao, hatao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, - Mat. 6:10.
Rehefa mandre ny amin'ireo loza mahatsiravina miseho isan-kerinandro izao aho, dia manontany tena: Inona no hevitr'ireny rehetra ireny? Mifanesy haingana dia haingana ireo antambo mampihoron-koditra indrindra. Impiry tokoa moa isika no mandre ny amin'ireo horohoron-tany sy rambon-danitra, ny faharavana entin'ny afo sy ny tondra-drano, miaraka amin'ireo fahaverezam-pananana maro sy famoizana ain'olona tsy tambo isaina! Raha ny fahitana azy dia toa avy amin'ny fitroatroatry ny hery samihafa mikorontana sy tsy voafehy ireo loza ireo, kanefa izany dia maneho ny zava-kendren'Andriamanitra. Anisan'ireo fomba entin’Andriamanitra hanairana ny lehilahy sy ny vehivavy hahatsapa ny loza mananontanona azy ireo izany.
Ny fiavian'i Kristy dia mihakaiky hatrany noho ny tamin'ny andro vao, ninoantsika voalohany. Efa eto an-tany ny fitsaran'Andriamanitra. Fampitandremana hentitra no ambarany: "Koa miomàna kosa hianareo; fa amin'izay ora tsy ampoizinareo rio hihavian'ny Zanak'olona".